२०२१ मा तपाईंको युट्युब च्यानलको लागि सही आलाको छनोट गर्दै - सबपल्स
YouTube संसारभरि लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको लागि मनोरञ्जन गन्तव्य हो। यो जीवनशैली होस् वा गेमि,, YouTube मा यो सबै छ। स्वाभाविक रूपमा, धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै च्यानलहरू सुरू गर्न, पर्याप्त ग्राहक आधार लिन र बिस्तारै यसबाट बाँच्न पनि चाहन्छन्।
एकचोटि तपाईंले सम्भावित ग्राहकको चासो लिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणमा नेल गर्नुभयो र तिनीहरूलाई तपाईंको च्यानलमा लगानी गर्नुभएमा, उनीहरूले तपाईंको भावी भिडियोहरू हेर्न अझ बढी इच्छुक महसुस गर्नेछन्। यो यूट्यूबको सौन्दर्य हो, प्रत्येक च्यानल - नयाँ वा पुरानो - ठूलो दर्शकहरूको संपर्कमा उचित अवसर प्राप्त गर्दछ। यदि तपाईंको सामग्री कटौती गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं सजिलै मा जान सक्नुहुनेछ यो तपाईंको पूर्ण-समय क्यारियर बनाउन।
यद्यपि यसको विशाल दृश्यता र मागको कारण प्रतिस्पर्धाको मात्रा पनि आसमान छ। नतिजाको रूपमा, धेरै नयाँ प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूले आफ्नो YouTube च्यानलको लागि छनोट गरेको आलाको बारेमा असुरक्षित महसुस गर्छन्। भन्नु आवश्यक छैन, यो अनिश्चित हुन उचित छ, प्रतिस्पर्धा कडा छ र तपाइँ बाहिर उभिन जरूरी छ। यहाँ एक आला छनौट गर्न को लागी एक सानो गाइड छ कि तपाइँ आफ्नै बनाउन सक्नुहुन्छ, र हामीले पनि सबैभन्दा लोकप्रिय YouTube आला विचारहरू चुनिएका छौं तपाईले रोज्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको च्यानललाई किन एउटा आलाको आवश्यकता छ?
को आलाको सबै भन्दा मूल कार्य यो हो कि तपाइँको YouTube च्यानल बाहिर राखिन्छ सामग्री को प्रकार को निर्णय। यो आधारभूत प्रकार्य पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंको सामग्री प्रकार मात्र निर्णय गर्दैन, तर तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई पनि। जब तपाइँ विशेष रुचि को विशेष को छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्नुहुनेछ जुन त्यस विशेष क्षेत्रमा रुचि राख्दछ।
एउटा च्यानल यसैले उनीहरूको धेरै जसो भिडियोहरूको लागि त्यो कोठामा रहन प्रयास गर्नुपर्दछ किनभने किनभने यूट्यूबका ग्राहकहरू त्यहाँ छन्। एकचोटि तपाईंले आफ्नो आलाको लागि भिडियोहरू सिर्जना गर्न रमाइलो गर्न थाल्नु भएपछि, YouTube दृश्यहरू र वास्तविक YouTube ग्राहकहरूको चिन्ता माध्यमिक हुनेछ। यसको सट्टामा, तपाइँको वृद्धि प्राकृतिक सामग्री च्यानल च्यानलको लागि तपाइँको उत्कटताको परिणाम स्वरूप आउँछ।
तपाइँको कोशिले पनि तपाइँ लाई प्रतिस्पर्धा को आराम भन्दा अलग सेट को काम गर्दछ। तपाईंले आफ्नो नयाँ च्यानल सुरू गर्नु अघि, यो सधैं आवश्यक छ कि तपाईंले कुनै विशिष्ट कोठामा निर्णय गर्नुपर्दछ।
कसरी एक आला छनौट गर्ने?
अहिले सम्म तपाईलाई थाहा छ कि एउटा आला छनौट गर्न कत्ति महत्त्वपूर्ण छ र यसले तपाइँको च्यानललाई फाइदा पुर्‍याउनमा के भूमिका खेल्दछ। हामी केहि तरिकाहरू हेरौं जुन तपाईंलाई निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्दछ तपाईंको लागि कुन ठाउँ एक हो।
एक च्यानल सुरू गर्दा, धेरै व्यक्तिहरू आफूले बनाउन चाहेको भिडियोको प्रकारमा कुनै नराम्रो विचार हुन्छ। उनीहरूले रूचि राख्ने सामग्री नै उनीहरूको स्थान हुन्छ।
तपाईंको च्यानलको उद्देश्य निर्णय गर्नुहोस्
यदि तपाईं धेरै अन्य YouTubers जस्तै हुनुहुन्छ, संभावना छ कि तपाईं भिडियो बाँच्न र यसलाई बाहिर पैसा कमाउन चाहन्छन्। यूट्यूब प्लेटफर्ममा धेरै च्यानलहरूको लागि एक प्रमुख आम्दानी बन्न पुगेको छ र यो केवल निष्पक्ष हो कि तपाईं पनि त्यसो गर्न चाहानुहुन्छ।
जहाँसम्म, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले पूर्ण रूपमा रमाईलोको लागि भिडियोहरू बनाउँदछन् र अपलोड गर्छन्। कहिलेकाँही, सब भन्दा सजिलै सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू जसले सबैभन्दा धेरै अनियमित भिडियोहरू निकाल्छन् पर्याप्त सदस्यता जुटाउँदछ किनकि यसको आफ्नै आकर्षण छ। व्यक्ति पनि त्यस्ता सामग्रीमा आकर्षित भएका छन् किनकि यो प्रतिस्पर्धी च्यानलहरूको एकलतामा स्वागत गरिएको परिवर्तन हो।
यसको मतलब के हो - तपाईलाई पहिले थाहा पाउनुपर्दछ कि तपाई आफ्नो ग्रोथ र सामग्री गुणस्तरको बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं भर्खर यी भिडियोहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने समय बित्छ।
के तपाइँ सिर्जना गरिरहनु भएकोमा साँच्चिकै इच्छुक हुनुहुन्छ?
एक शीर्षकमा भिडियोहरू बनाउनु जस्तो तपाईंलाई लाग्छ राम्रो बिक्री हुन्छ, तर तपाईंलाई व्यक्तिगत रूचि छैन, शुरुका केही महिना उत्तम लाग्न सक्छ। तर यदि तपाइँ लामो समयको लागि सान्दर्भिक रहने योजना बनाउनु हुन्छ भने, यो काउन्टरप्रडक्टिव हुन सक्छ।
एक शीर्षकको लागि तपाइँको उत्कटताले तपाइँको दर्शकले तपाइँका भिडियोहरू कसरी प्राप्त गर्दछ भनेर निर्णय गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जब तपाइँ तपाइँको कोञ्चमा साँच्चिकै इच्छुक हुनुहुन्छ, यसले तपाइँको सामग्रीमा झल्काउँछ र दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यदि तपाईंको कोशिस तपाईंको लागि रुचिको विषय हो भने, तपाईंलाई सामग्री बाहिर राख्न यो सजीलो सजिलो हुनेछ।
धेरै व्यक्तिहरू YouTube छनौट गर्छन् किनकि उनीहरू बोरि। अफिस काम चाहँदैनन्। यदि तपाइँले एउटा आला छनौट गर्नुभयो जुन तपाइँको लागि कुनै विशेष अपील छैन भने, रेखा अन्तर्गत केहि भिडियोहरू - YouTube भर्खरै अर्को काम हुनेछ। तपाइँ यस्तो चाहनुहुन्न कि केहि भइरहेको छ र तपाइँ को लागी भावुक हुनुहुन्छ को लागी तपाइँ तपाइँको सामग्री संग बोर हुने संभावनाहरु कम हुनेछ।
त्यसोभए, तपाईंलाई मनपर्ने को लागी एक विकल्प को लागी अप्ट आउट र साप्ताहिक भिडियोहरू churning एक घरजग्गा को विपरीत हुनेछ।
के तपाईंलाई आलाका बारे पर्याप्त जानकारी छ?
जोश महत्त्वपूर्ण छ, तर ज्ञान पनि छ। जे होस् तपाई एक विषयको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ, औसत दर्शकको बराबर ज्ञान हुनु समस्या हुन सक्छ। मानिसहरूले प्रदान भिडियोको लागि YouTube भिडियोहरू हेर्छन्। यदि तपाईंको भिडियोले उनीहरूलाई पहिले नै थाहा भन्दा बढि बताउँदैन भने उनीहरूलाई लाग्दछ कि तपाईंको सामग्री हेरेको समय व्यर्थ हो।
यद्यपि, सकारात्मक नोट-मा अधिक चासोको विषयमा बढी ज्ञान एकत्रित गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। त्यसोभए पनि यदि तपाईंलाई आफ्नो कोठाको बारेमा धेरै थाहा छैन भने पनि, यदि तपाईंसँग पर्याप्त प्रेरणा छ- तपाईं यसलाई गहिराइमा आफैंसँग परिचित गराउन सक्नुहुन्छ।
सँधै याद गर्नुहोस् कि तपाइँलाई तपाइँको कोञ्चको बारेमा अद्यावधिक राख्नुहोस् र हरेक सम्भावित अवसरमा तपाइँको ज्ञानलाई तिखार्नुहोस्।
तपाईंको श्रोतालाई विचार गर्नुहोस्
तपाईंको सामग्रीको लागि पर्याप्त श्रोताहरू हुनु भनेको तपाईंको सामग्रीको गुणस्तर जत्तिकै विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि, प्रत्येक YouTube च्यानलले उनीहरूको दर्शकले खोजिरहेको कुराको प्रति सजग हुन प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंले तिनीहरूको माग पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंको च्यानल वृद्धि जैविक हुनेछ भन्नेमा कुनै श .्का छैन।
यदि तपाइँ सामग्री सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ जुन कसैले पनि खोजिरहेको छैन भने, त्यसो भए धेरै जसो ध्यान नदिई जोखिममा खडा हुन्छन्। यस समस्याको समाधान गर्न, गुगल ऐडवर्ड्स किवर्ड प्लानर र गुगल ट्रेन्ड्स काम आए। पूर्वले तपाइँलाई खोज इञ्जिनमा खोजिएको कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा बताउँदछ र पछिल्लोले ट्रेन्डिंग शीर्षकहरूमा एक विचार दिन्छ।
सबै लोकप्रिय कुञ्जी शव्द र शीर्षकहरू हेर्नुहोस् जुन चलनमा छन् र तपाइँको कोठासँग सम्बन्धित छन्। त्यस्ता शीर्षकहरू पहिचान गरेपछि, तिनीहरूलाई तपाईंको भिडियो, शीर्षक र वर्णनमा समाहित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो गरेर, तपाईं तपाईंको श्रोताहरूलाई उनीहरूले के माग्नुहुन्छ दिनुहुन्छ र साथसाथै धेरै जोखिम पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूबाट सिक्नुहोस्
तपाईं एक व्यापक आला वा एक संकीर्ण एक छनौट गर्नुहोस्, तपाईंसँग सँधै प्रतिस्पर्धीहरू अवलोकनका लागि संघर्ष गर्दैछन्। यदि तपाईंको कोठा श्रोता देखि उच्च मांग छ, तपाईं पनि धेरै प्रतिस्पर्धी हुनेछ। धेरै प्रतिस्पर्धी हुनु भनेको संघर्ष गर्नु आवश्यक छैन। तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूले वितरण गरिरहेका सामग्रीलाई हेर्ने अवसरको रूपमा लिनुहोस्।
यो तपाइँ तपाइँको लक्षित श्रोता द्वारा भिडियो के मनपर्दा राम्रो छ मा एक निष्पक्ष विचार दिन्छ।
अन्य YouTuber को सामग्री, उनीहरूको अवलोकन र च्यानल सदस्यता मा हेर्नुहोस्। गहिराइको मनपर्नबाट र हरेक भिडियोको मनपर्ने, मन नपर्ने र टिप्पणीहरू नहेर्नुहोस्। कुन भिडियोहरू अधिक मनपर्दछ र हेराईहरू कम गर्छन् हेर्नुहोस् र उनीहरूका दर्शकहरूले टिप्पणीमा के भन्छन्।
तपाइँको लक्षित दर्शकहरूको स्वादमा एक स्पष्ट दृश्य हुनु पक्कै तपाइँलाई तपाइँको YouTube क्यारियर किक-अफ गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँ कसरी आफ्नो दर्शकहरु लाई तपाइँको सामग्री मा लगानी राख्ने बारे जान्नु हुन्छ र तपाई प्लेटफर्ममा उपलब्ध अन्य भिडियोमा बढि मान थप्न कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ। YouTube दर्शकहरूले सँधै नयाँ दृश्यलाई मनपराउँदछ र तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको पुरानो शीर्षक प्रस्तुत गर्न नयाँ तरिकाहरू / विचारहरूको विचार गर्नुपर्दछ।
सब भन्दा लोकप्रिय यूट्यूब आला
अरू सबै सामाजिक प्लेटफर्महरू जस्तै, यूट्यूबको पनि विशिष्ट आला जोको उच्च माग छ। यद्यपि यी ठाउँहरूका लागि दर्शक ठूलो छ, प्रतिस्पर्धा पनि कटथ्रोट हो। यदि तपाईंसँग पर्याप्त रुचि छ भने तपाईं यी कुनै पनि YouTube कोठा छान्न सक्नुहुन्छ:
खाद्य सामग्री सबै यूट्यूबमा मात्र होइन सबै सोशल मिडियामा सबैभन्दा ठूलो आलाको एक हो। यदि तपाइँसँग राम्रो खानाको लागि स्वाद छ वा यदि तपाइँ नयाँ रेसिपीहरूसँग आउँनुहुन्छ भने, खाना भिडियोहरू बनाउनु तपाइँको कोठा हुन सक्छ। खाना सामग्री नुस्खा सिर्जना गर्न मात्र सीमित छैन, तपाईं खाना ब्लगिंग पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
गेमिING र टेक
खेल क्षण कम्पाइलेसनबाट लाइभ स्ट्रिम र समीक्षाहरू, गेमिaming सामग्रीको आजकल ठूलो माग छ। टेक सामग्री युट्यूबले सामान्यतया बजारमा नयाँ उत्पादनहरूको समीक्षा गर्दछ, यो नयाँ फोन लन्च वा गेमि PC पीसी हो।
DIY र सबै को लागी
भिडियोहरू जसले DIY ट्यूटोरियलहरू र अन्य ह्याक्सहरू सिकाउँदछन् YouTube सँधै धेरै दर्शकहरूको चासो लिन्छन्।
फैशन र म्याकअप
धेरै यूट्यूब मेकअप गुरुहरूको लोकप्रियता जसले सानो सुरु गरेर मुख्यधाराको आइकनहरू बनायो यस ठाउँको सफलता सम्भावनाको लागि मृत्युपत्र हो।
फिटनेस र स्वास्थ्य लाइभ
यो कोठा फिटनेस, पोषण र खेलकुदको बारेमा साँच्चिकै चासो राख्ने व्यक्तिहरूको प्रभुत्व हो। यदि तपाइँलाई लाग्छ कि तपाइँका सुझावहरूले व्यक्तिलाई उनीहरूको स्वस्थता लक्षहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, यो को लागी तपाइँ को लागी आदर्श हुन सक्छ।
यूट्यूबमा कोठाको संख्यामा कुनै कमी छैन। तपाईले भ्गलिंगको पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई लाग्छ तपाईको श्रोतालाई तपाईको आदर्श जीवनमा व्यस्त राख्ने सम्भाव्यता छ। अन्तमा, यो सबै तपाईंको विशिष्ट रुचिहरूमा अल्छी हुन्छ र तपाईं श्रोताको प्रभावलाई कति कुशलतासाथ आकर्षित गर्नुहुन्छ। तपाईं यो काम तब मात्र गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं कुनै एक आला छान्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ।
तपाईंको YouTube च्यानलको लागि व्यावसायिक गुणवत्ता भिडियोहरू सिर्जना गर्दै
यदि तपाइँ तपाइँको YouTube ग्राहकहरूलाई केहि दिन चाहानुहुन्छ तिनीहरू फर्केर आउन चाहानुहुन्छ, तपाईले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाई महान् गुणस्तर भिडियोहरू अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ। पेशेवर शट भिडियोको साथ, तपाईं ल्याउन निश्चित हुन सक्नुहुन्छ ...
यूट्यूब भिडियो: क्यामेरा एles्गल र फिलिमिंग को बारेमा सबै थाहा पाउनुहोस् तपाईंले तिनीहरूलाई गोली हान्नु अघि
धेरै 'विशेषज्ञहरू' तपाईंलाई भन्नेछन् कि YouTube सबै सामग्रीको बारेमा हो, र यदि तपाईंसँग तपाईंको ब्रान्डसँग सम्बन्धित आश्चर्यजनक सामग्री विचारहरू छन् भने तपाईं यसको अधिकतम लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। जे होस्, प्रस्तुति छ ...
YouTube प्रिमियम के हो, र यसले सिर्जनाकर्ताहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ?
प्रत्येक अनलाइन प्लेटफर्मले यसको दर्शकहरूलाई बिभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्न यसको वेबसाइटलाई पुन: सुधार गर्न घण्टा काम गर्दछ। २०१ 2018 मा, गुगलले यूट्यूब प्रिमियम परिचय गरेर यूट्यूबलाई पुनर्निर्माण गर्न एक कदम चाल्‍यो। यो सुरू गरिएको थियो ...
12 अप्रिल 2021